စွဲငြိဖွယ်ရာ - စာမျက်နှာ 10 - NAB Show ကိုသတင်းထုတ်လွှင့်ဘိ, NAB ပြရန်၏တရားဝင်ထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြင့် - NAB Show ကိုတိုက်ရိုက်
Home » Tag Archives: immersive (စာမျက်နှာ 10)
Tag Archives: စွဲငြိဖွယ်ရာ
Los Angeles - အ Motion Picture ၏ Society ရဲ့ဟောလိဝုဒ်ပုဒ်မနှင့်ရုပ်မြင်သံကြားEngineers® (SMPTE®), အဘယ်သူ၏စံချိန်စံညွှန်းများအလုပ်ဖျော်ဖြေရေးနည်းပညာနည်းပညာတိုးတက်လာတစ်ရာစုထောက်ခံထားပါတယ်အဖွဲ့အစည်း၎င်း၏ 2017 ပုဒ်မရွေးကောက်ပွဲများ၏ရလဒ်များကိုကြေညာခဲ့သည်။ ဟောလိဝုဒ်ပုဒ်မအရာရှိများအတွင်းရေးမှူး / ဘဏ္ဍာရေးမှူးအဖြစ်ပုဒ်မကုလားထိုင်အဖြစ်ဂျင်မ် DeFilippis နဲ့ Steve Wong ကဖြစ်သကဲ့သို့အသစ်တစ်နှစ်ဝေါဟာရများမှရွေးကောက်တင်မြှောက်ထားသော။ ...
ချာနိုဘိုင်းများ၏စွန့်ပစ်ရှုခင်းအတွက်ဖိလိပ္ပုမမေ့ဘူးရဲ့ခုနစ်ခုနှစ်တွင်ရှာပုံတော်, ယူကရိန်းတစ်ဦးရှားလော့ဟုမျး၏အစစ်အမှန်ဘဝစွန့်စားမှုခံစား Indiana ပြည်နယ်ဂျုံးစ်နှင့်တွေ့ဆုံရှိပါတယ်။ အဆိုပါသိပ္ပံ Channel ကိုစီးရီး, THE စွန့်ပစ်၏နက်နဲသောအရာဖြစ်ပေ: 31 ညနေ ET / PT မှာကြာသပတေးနေ့, သြဂုတ်လ9premiering ချာနိုဘိုင်း'S သေစေနိုင်သောလျှို့ဝှက်ချက်ဖြစ်ပါသည်တစ်ဦးဒါပေါက်ပေါက်အောင် start ကိုတွေ့မြင်ရပေမည်။ အဆိုပါစီးရီးမမေ့ဘူးအဆိုပါစုံစမ်းစစ်ဆေးရပါလိမ့်မယ် ...
Lynx Technik IBC 12 မှာ 4k တစ် Reality များအတွက် 2017G SDI ကို
Lynx Technik AG က, ထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ် AV စနစ်ဆစ်ဂနယ် application များအတွက် modular interfaces ၏ပံ့ပိုးပေး, 12.C4 ရပ်, IBC 2017 မှာ 8k / UHD Workflows များအတွက် 70G SDI အပေါ်တစ်ဦးအာရုံထွန်းလင်း။ ultra high definition (UHD) တစ်ခုတည်း coaxial cable သို့မဟုတ် optical fiber ကိုကျော် 12 Gbps တစ်မှုနှုန်းမှာဒေတာလွှဲပြောင်းနိုင်သောစနစ်တစ်ခုလိုအပ်သည်။ IBC မှာ Lynx Technik ပါလိမ့်မည် ...
ပိုကောင်း၏အကြောင်းအရာ; ပိုများသောမျက်နှာပြင် ... အခုတော့ Delivery လာ
"သင်ထပ်ဒုက္ခ၌ငါ့ကိုရမယ်။ သင်သည်အစဉ်အအဆိုးဆုံးစျေးဝယ်ဖက်ပါပဲ။ "- Ofglen" ကြှနျမတို့ရဲ့ပုံပြင်, လှုပ်ရှားမှုများ-Discovery Channel ကိုဖွင့်ငါးမန်းအပတ် "စောင့်ကြည့်ကိုယ်ရောစိတ်ပါ" MGM, 2017 ရုံမကြာသေးမီကအဘယ်အရာကိုငါ့အနှစ်စဉ်တဦးဖြစ်လာသည်ခံစား "။ ဒါကြောင့်ငါးမန်းကယ့်ကိုရုပ်ရှင်တွေထဲကသူတို့ကိုဖန်ဆင်းထားသောအသိဉာဏ်မရှိတဲ့သတ်ဖြတ်မှုစက်တွေမစပ်ဆိုင်ကြောင်းကိုပြသထားတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါဟာကောင်းတဲ့ပရိုဂရမ်ရဲ့ ...
ခြောက်ဆယ် IBC 2017 မှာအပြန်အလှန်တိုက်ရိုက်တီဗီပါဝငျနှင့်အတူရုပ်သံ၏အနာဂတ် redefines
ခြောက်ဆယ်, အအပြန်အလှန်တီဗီကုမ္ပဏီ, ယနေ့ကအပြန်အလှန်တီဗီပလက်ဖောင်းပြောင်းလဲနေတဲ့သည်၎င်း၏ဂိမ်းအတွေ့အကြုံများကိုကြည့်ရှုပိုပြီးဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့, အရည်အသွေးမြင့်မားကယ်လွှတ်ခြင်းငှါထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့်အကြောင်းအရာပိုင်ရှင်များဖွဘယ်လို IBC 2017 (15-19 စက်တင်ဘာလ 2017) စဉ်အတွင်းသရုပ်ပြလိမ့်မည်ဟုကြေညာခဲ့သည်။ ထို့အပြင်သူကလည်းအသစ်သောအားကစားများနှင့်ထုတ်လွှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းမိတ်ဖက်ဆွေးနွေးရန်နှင့်၎င်း၏နှိပ် On-ဝေဟင်ဂရပ်ဖစ်ဖြေရှင်းချက်အဆင့်မြင့်ကြော်ငြာကို enable နိုင်ပါတယ်ပုံကိုသရုပ်ပြပါလိမ့်မယ် ...
SET Expo မှာ Soliton Zao-S က H.265 မိုဘိုင်းအန်ကုဒ်တင်ဆက်ထားပါတယ် Foccus ဒစ်ဂျစ်တယ် 2017
Foccus ဒစ်ဂျစ်တယ်နှင့် Palma နိုင်ငံတကာနည်းပညာ Sao Paulo အတွက်သြဂုတ်လ 265- 2017 ထံမှ SET Expo 22 မှာ Soliton Zao-S က H.24 / HEVC အန်ကုဒ်တင်ပြပါလိမ့်မယ်။ ultra ပေါ့ပါးကျစ်လစ်သိပ်သည်းခြင်းနှင့်ခရီးဆောင်, Zao-S ကခန္ဓာကိုယ်အသုံးပြုသူများအပင်စိန်ခေါ်မှု bandwidth ကိုအခြေအနေများတွင်အရည်အသွေးမြင့်မားသောဗီဒီယိုစီးဆင်းခွင့်ပြုစက်ဘီး, ကင်မရာများ, ဒါမှမဟုတ်မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်မှတပ်ဆင်ထားသို့မဟုတ်ချိတ်ဆက်နိုင်ပါတယ်။ Soliton ရဲ့ Zao-S ကများအတွက်စံပြဖြစ်ပါတယ် ...
IBC 2017 မှာအသစ်အပို့ဆောင်ရေး Stream features တွေမိတ်ဆက်ငါးကြက်တံခွန်
ငါးကြက်တံခွန် Technologies က, ထုတ်လွှင့်ကြော်ငြာသွင်းနည်းပညာဆန်းသစ်, IBC 2017 မှာပို့ဆောင်ရေး Stream ထုတ်ယူခြင်းထုတ်ကုန်များ၏၎င်း၏အကွာအဝေးများအတွက် features အသစ်တခုအဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ငါးကြက်တံခွန် Technologies က '' ကောင်းချီး TS Splicer ထုတ်ကုန်လာရောက်ပူးပေါင်းသည့် TS Switch, stand-alone switching application များအတွက်ဒီဇိုင်း, ဒါမှမဟုတ် automated ပေးပို့ကွန်ရက်များသို့ပေါင်းစည်းတဲ့ software ကို-based သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစီး switch သည်ဖြစ်လိမ့်မည်။ ငါးကြက်တံခွန် Sales & Marketing Director ဖြစ်သူပတေရုသ Blatchford, ပြောကြားခဲ့့သည်က ...
အဲဒီမှာ Smooth တစ်ဦးအနည်းငယ်အခက်အခဲများကိုဆဲဖြစ်ကြောင်း, တင့်တယ် OTT ကိုကြည့်ခြင်းအား
"အလေ့အကျင့်။ ။ အလေ့အကျင့်များများ "- အလှမယ် Spalding" ဟု The မြင့်မားခြင်းနှင့်တန်ခိုးကြီးသော, "Warner Bros. , 1054 ဒီနေ့သင်ကသင်၏ဆိအပြစ်ပေးဖို့လိုပါလျှင်; သင်သည်သူတို့၏စရိတ်နှိမ်ကြဘူး, သူတို့ရဲ့ Big ဘီးကိုပယ်ရှင်းကြဘူး, သူတို့ရဲ့အခန်းကမှသူတို့ကိုမပို့ပါဘူး, သူတို့ကိုမြေပါဘူး။ Nope, သင်ကအင်တာနက်ထဲကနေသူတို့ကိုပယ်ရှင်း - မပါကို streaming တီဗီမရှိကွန်ပျူတာမရှိ ...
ODMedia ယင်း၏ High Quality Encoding Facility ဖြည့်စွတ်ရန် ATEME ရဲ့ Titan ဖိုင်မှတ်တမ်းကိုအသုံးပြုမည်
ATEME င်း၏ဗီဒီယိုကို transcoding software ကိုတိုက်တန်းနစ်©ဖိုင်မှတ်တမ်းက၎င်း၏အရည်အသွေးမြင့် encoding ကစက်ရုံမှအပို features တွေပေး ODMedia, ဝယ်လိုအားအပြည့်အဝဝန်ဆောင်မှုကုမ္ပဏီအပေါ်တစ်ဦးဦးဆောင်ဥရောပဗီဒီယို, အသုံးပြုသောခံကြောင်းယနေ့ကြေညာခဲ့သည်။ titan ဖိုင်မှတ်တမ်း ATEME ရဲ့ပဉ္စမမျိုးဆက် Streams ©ချုံ့အင်ဂျင်အပေါ်အခြေခံခြင်းနှင့်အရှိန်မြှအပြိုင်အပြောင်းအလဲနဲ့အတူနိမ့်ဆုံးဖြစ်နိုင်သမျှအတွက်ဘစ်နှုန်းမှာအမြင့်မားဆုံးသောဗီဒီယိုအရည်အသွေးကိုကယ်တင်ဖြစ်ပါတယ်။ ...
Canon USA သို့ Studio နှင့် POST ကြိုတင်ရုပ်ရှင်ရုံစက်မှုလုပ်ငန်း RESOURCE Facility ဖွင့်လှစ်
နယူး Professional က Burbank, ကာလီဖိုးနီးယားအတွက်ဝန်ဆောင်မှု & စင်တာ။ , စတူဒီယိုများအတွက် Dedicated တည်နေရာဖြစ်လာ Post-ထုတ်လုပ်မှု်ဆောင်မှုများ, ပေးသွင်းနှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အဖွဲ့အစည်းများအတွက်ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးရေးအတွက်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဖောက်သည်က၎င်း၏ထောက်ခံမှုဆက်လက်ဆဲအသိုင်းအဝိုင်း imaging, Canon ၏ယခုအပတ်တရားဝင်ယင်း၏ရန်၎င်း၏တံခါးများဖွင့်လှစ် Burbank, California မှာနောက်ဆုံးပေါ် Professional ကနည်းပညာ & စင်တာ။ , Canon ၏မူလဟောလိဝုဒ်စက်ရုံမှာစတင်ခဲ့သောအရာကိုအနေဖြင့်ဖြစ်ပေါ်နေသော ...
Tedial ယူ. IMF က Workflows နှင့် SMPTE 17 သြစတြေးလျမှာသိုလှောင် Virtualization
ကုမ္ပဏီအဘို့အ IMF ကဖြေရှင်းချက်မှ SMPTE စံချိန်စံညွှန်းလျှောက် end-to-အဆုံးလုပ်ငန်းအသွားအလာနှင့်ဒီမိုက၎င်း၏နယူးတော်လှန်ရေးကောင်စီသိုလှောင်စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်ဂါ, စပိန် - Tedial, ဦးဆောင်လွတ်လပ်သောပေးခဲ့သည်နည်းပညာဖြေရှင်းချက်အထူးကု SMPTE ရန်၎င်း၏ IMF ကဖြေရှင်းချက်နှင့်အသစ်တိုးပွား storage (AST) စနစ်ကိုယူပါလိမ့်မယ် သြစတြေးလျအတွက် 17 ညီလာခံ & ပြပွဲ, အသံလွှင့်, မီဒီယာနှင့် Entertainment ကနည်းပညာများအတွက်ဒေသ၏ဝန်ကြီးချုပ်ဖိုရမ်တစ်ခု။ အဆိုပါ ...
ယင်းတောရိုင်းသို့ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရသူခံရ Enhanced Virtual Reality ကို Creative ရုပ်ရှင်ပွဲတော် Tools များ
"သူတို့ကကျွန်တော်တို့ကိုသတ်မှတ်လျှင်အဖြစ်ကျနော်တို့အမှတ်တရများမှတွယ်ကပ်, ဒါပေမဲ့သူတို့မကျင့်။ အဘယ်အရာကိုကြှနျုပျတို့ပွုကျွန်တော်တို့ကိုသတ်မှတ်ပါတယ်အရာဖြစ်တယ်။ "- ဒေါက်တာ Ouelet" ဟုအဆိုပါရှဲလ်အတွက်ဝိညာဉ်တော်, "Paramount, 2017 ပုံမှန်လူတွေမသိကြပါ - သို့မဟုတ်ပြုစုစောင့်ရှောက်မှု - တစ် CPU ကို (central processing unit) နှင့်တစ်ဦး GPU ကိုကြားခြားနားချက်နှင့် ပတ်သက်. (ဂရပ်ဖစ် အပြောင်းအလဲနဲ့ယူနစ်) ။ သူတို့ကရိုးရှင်းစွာမိမိတို့၏အသုံးပြုချင် ...
"သင်ဂုဏ်နကမ္ဘာကြီးကိုစစ်3ပေါ်တွင်သင်၏မျက်စိပိတ်လိုက်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်သင်ဂုဏ်နကုန်းနှီးတက်နေနှင့်တစ်ခုလုံးသူကပြောတယ်ကမ္ဘာကြီးသိမ်းဆည်းပါ။ " - Hobbes "ဟုအဆိုပါ & Furious ၏ကံကြမ္မာ" Universal Studios က, 2017 ATSC (Advance ရုပ်မြင်သံကြားစံချိန်စံညွှန်းကော်မတီ) 3.0 အတော်လေးသေးတကမ္ဘာလုံးအကောင်အထည်ဖော်နိုင်ခြင်းမရှိသေးပေ; ဒါပေမယ့်ကောင်းစွာကိုရီးယား၌တည်နေသည် - အိုလံပစ်ပွဲတော်များအတွက်ပြင်ဆင်မှုအတွက်; နှင့်တဖြည်းဖြည်းဖြစ်ပါတယ် ...
10 ၏စာမျက်နှာ 22«ပထမဦးစွာ...«89101112	»	20...နောက်ဆုံး»